JONGA IMIZUZU ELISHUMI ELINESIHLANU YOKUDLALA UMDLALO OVELA KWI-STAR WARS JEDI: UMYALELO OWILEYO - YEMIDLALO
Jonga imizuzu elishumi elinesihlanu yokudlala umdlalo ovela kwi-Star Wars Jedi: Umyalelo owileyo
Namhlanje kumnyhadala we-EA Play eLos Angeles, iMidlalo ye-EA kunye ne-Respawn ityhilwe imizuzu elishumi elinesihlanu yokudlala umdlalo ozayo I-Star Wars Jedi: Umyalelo owile, ityhila kungekuphela nje kobunye bomdlalo kodwa i-Forest Whitaker ibuya njengoSaw Gerrera. Jonga umfanekiso ongezantsi.
Ngelixa andikathengiswa kwi-protagonist okwangoku, umdlalo obonakalayo ubonakala unomdla. Ngubani ongafuni ukuba yiJedi kwaye asebenzise amandla abo ngokulungileyo?
Kuhlala kukuhle ukubona iSaw ejikeleze. Uhambo olubi lomlinganiswa olusuka eOnderon kwi Iimfazwe zeClone kuJedha ngaphakathi Inamandla enye kuye kwamangalisa ukunikela ubungqina. UGerrera uye waba sisiseko sexesha leMvukelo yokubalisa amabali, kwaye ndiyathemba ukuba uyakuba yinxalenye yechungechunge leTV elizayo laseCassian Andor.
Imishini eboniswe kwividiyo iza emva kweeyure ezintathu zomdlalo wokudlala, ngokwe Verge . Umdlalo womdlali omnye ugxile kuCal Kestis (uCameron Monaghan), ongenguye-Jedi osokolayo ukusinda kwiminyaka elandela i-Order 66 kunye nokunyuka koBukhosi. UmdlaloInformer ubhala ngomlinganiswa : Ukuphendula akafuni kuthetha lukhulu ngeCal okanye ngembali yakhe, ethetha ukuba angangomntu obalulekileyo. Ngaba uCal wayenokubopha kwilifa leJedi esingaziyo ngalo?
Ndicinga ukuba akangotata kaRey nangona. Masikhuphe nje loo ngcamango kwi-bud.
I-villain ephambili iya kuba nguDade weSibini, i-Inquisitor enikwe umsebenzi ngu-Vader kunye ne-Emperor yokuzingela nokubulala iJedi eseleyo. Abavavanyi bavela okokuqala kumdlalo kamabonwakude Iimfazwe zeNkanyezi , apho zazisoyikeka ngokufanelekileyo kwaye ziziintshaba ezigqwesileyo kwiimvakalelo zoMkhosi. Kubalandeli bamabhinqa amabi, uSisi weSibini uqinisekile ukuba uyanyanga. Abanye bade bacinge ukuba anganguBarriss Offee, uPadawan kunye nomhlobo ka-Ahsoka ojike iJedi Order kwaye wazama ukubiyela u-Ahsoka kuhlaselo lwetempile, oluya kuba yinto emangalisayo kubalandeli Iimfazwe zeClone.
Nangona inxenye yam isanqwenela ukuba lo ibingumdlalo wevidiyo ojolise kuKanan Jarrus noHera Syndulla kwangoko emva kweziganeko zencwadi Ukukhanya okutsha Ukujongwa komdlalo weqonga kuyandonwabisa ukudlala umdlalo. Indawo yedabi 2 ibinemiba yonke, kodwa ibali yayingelilo elinye lazo. Ukuba iCal sisiqingatha somdla njengo-Iden Versio, umdlalo uya kuba longezo olugqwesileyo kwi-canon.
Umdlalo uya kufumaneka ukudlala kwi-Xbox One, kwi-PlayStation 4, nakwi-PC ngo-Novemba we-15.
(umfanekiso: EA / Ukuphendula)
ijeff goldblum kufuneka ihambe ngokukhawuleza kwe-gif
umzingeli omnyama wechungechunge lwetv
yayiyilanteni eluhlaza eluhlaza emnyama